ALL OO KU SAABSAN DARYEELKA IYO BEERITAANKA OF CURRANTS CAS - BOQOLLEY BEERTO
Ugu Weyn Ee Boqolley beerto
Currant cas. Qaababka beeraha iyo daryeelka
Currant casriga ah waa miro dheelid, taas oo kuu ogolaaneysa in aad ka saarto xad-dhaafka jidhka, adigoo kaliya u baahan oo keliya. Waxay noqon doontaa mid dhab ah oo loogu talagalay kuwa daaweeya tiradooda, sababtoo ah waxay ku jiraan kalooriyo yar, sidoo kale waxay leeyihiin fitamiin C, potassium iyo birta oo ku yaal qolalka kaydka ah, taas oo u oggolaanaysa inay xakamayso dhaqdhaqaaqa wadnaha.
Carruurta iyo dadka waaweyn, berri ahaan waxay u adeegi kartaa dhiirigelin aad u fiican oo kor u qaadaya rabitaanka cuntada, waxaa lagu talinayaa in la cuno haemoglobin hooseeya. Si kastaba ha noqotee, waa in la xasuustaa haddii aad leedahay boogaha lafdhabarta ee habka dheef-shiidka, ka dibna ma cuni kartid currants cas. Sidee loo heli karaa berry muhiim ah oo muhiim ah? Waxaad iibsan kartaa, laakiin waxaa fiican inaad naftaada koraan. Sidaas darteed, sababta. Koraaya oo daryeeli kara currants cas bilowga ah.
Noocyada caanka ah ee currant cas
Waxaa jira noocyo kala duwan ee currant cas, laakiin waxaan ka hadli doonaa kuwa ugu caansan. Noocyo badanaa waxaa lagu kala soocaa midabka midabkooda midabka, xajmiga berry, waqtiga ay bislaadaan, iyo cabbirka iyo qaabka caleemaha.
Tusaale ahaan, kala duwanaanshaha casriga ee Dutch ayaa noo yimid oo ka yimid Western Europe. Its duurka waa yar yahay, laakiin aad u sareeya, iyo berry, marka bislaado, noqdaan ku dhowaad bunni ah. Qaababka caleemaha waxay la mid yihiin cawska dhuuban.
Kala duwan oo kale - hore u macaan, ripens goor hore (bilawga Luulyo), wuxuu leeyahay miraha yar yar ee jirida dheer. Berry waa mid aad u dhadhan leh oo udgoon, ma dhici karto muddo dheer baadiyaha.
Yonker van Tets kala duwan ayaa kala duwan by berry guduudan oo cas, iyo sidoo kale iska caabin ah dhaxan daran iyo cudurada fungal.
In qeybtii hore ee July, noocyo kale oo sidoo kale caleemo - Konstantinovskaya, kaas oo leh berry dhexdhexaad ah, laakiin waxa ay u liidata cudurada fungal.
Sidaas darteed, waxaad ku wareejin kartaa waqti dheer. Goorta, ugu dambeyntii, aad go'aansato noocyada aad rabto inaad ku beerato, waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh uga fikirto meesha dhabta ah ee aad ku koraan. Tani waxay sidoo kale ka caawin doontaa talada our.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan daryeelka iyo beeritaanka strawberries.
Diyaarinta ciidda iyo bacriminta beerashada currants
Waxa ugu wanaagsan in la doorto meel bannaan oo iftiin leh, sababtoo ah haddii iftiinku uusan ku filneyn, berry wuxuu noqonayaa mid aad u badan, mana awoodi doono inuu helo awoodooda.
Sidoo kale, waa lagama maarmaan in la tixgeliyo nooca daboolka ciidda. Currant casaanka jecel yahay dabacsan, carrada loamy, leh aeration wanaagsan. Laakiin, haddii goobtaada, biyaha dhulka kuugu dhow yahay lakabka ugu sareeya ee carrada, ka dibna waxa fiican in la beero duurka heerarka, ma ilaawin dheecaan.
Ma aha mid aad u jeclaan lahaa berry iyo carrada leh content sare ee nadiifinta alkol, kaas oo gubi karaa nidaamka xididka iyo keena dhimashada geedka. In duurka, duurka u currant cas oo laga heli karaa Urals, on bangiyada webiga ama agagaarka kaynta.
Si ka duwan sida currant madow, casaan ma aha mid si xun u falcelisa kulaylka, iftiinka xad-dhaafka ah iyo abaar yar. Currants cas ayaa la beeray xilliga dayrta iyo horraanta gu'ga, ka hor inta aanad kicin kelyaha.
Ceelka waa in horay loo diyaariyaa, ugu yaraan hal wiig ka hor, si ay dhulku u degaan, iyo dheecaanku waa inay ku dhacaan. Qiyaasta ceelasha waa inay ahaataa qiyaastii 50 cm oo ballaaran oo aan ka yarayn 40 cm oo qoto dheer. Marka hore, waxaan hoos u dhignay godadka, waxaanay jiifinaynaa dheecaan ah qaababka dhagaxyada dhexdhexaadka ah, oo ay ku xigto compost ama, si kale, digada qoyan leh qoryaha qoryaha iyo lakabka ciidda bacrin ah, si ay u quudiyaan seedling . Waxaad ku dari kartaa isku dar ah superphosphate leh sulfate potassium, ee saamiga 1: 2.
Guud ahaan, currant cas oo jecel Bacriminta organic (nitrogen, fosfooraska, potassium), laakiin ma u dulqaadan Bacriminta chloride. Ka taxadar sidan markaad dooranaysid Bacriminta adag.
Beerto: wakhtiga, sifooyinka iyo waraabinta
Ka hor intaan la beeri, ku dhaji xididada biyaha 2 saacadood, ma aha wax ka badan, sababtoo ah joogitaanka dheer ee biyaha, xididdadu waxay lumin karaan potassium, taas oo si weyn u wiiqi doonta geedka. Waxaad ku dari kartaa daawooyinka saxda ah biyaha.
Tan iyo currant cas oo leh nidaam xidid adag, xididada u baahan tahay in lagu aaso dhulka ku beeray. Isla mar ahaantaana, ha ilaawin inaad gooyso daciifka oo gaabisaa xoogga 2 jeer. Intaa waxaa dheer, manjooyin ay ku qaataan, diiradda saaraan kelyaha, kuwaas oo lagu tilmaamayo dibadda iyo koritaanka geedo - waxay ka timaadaa in qaabka cusub ee baadiyahaaga ay koraan.
Waxa ugu wanaagsan in la beero duurka horraantii Sebtembar, isku day inaadan seegin waqtigan, haddii kale kobaca dhalinyaradu ma heli doonaan wakhti ku filan si ay u qaataan xidid ka hor bilawga xilliga qaboobaha. Waa inaad sidoo kale xusuusataa inaad ixtiraamto masaafada u dhexeysa duurka inta lagu jiro beerto, laakiin waxay ku xiran tahay nooca currant cas. Wixii duurka yar yar, qallafsan, fogaan ah 1-1.5 mitir waa ku filan, iyo faafinta kuwa - ugu yaraan 1.5-2.5 mitir. Ka dib markii laga beerto geedo hubi inaad iyaga biyo ku biyo 20-30 litir oo biyo ah.
Daryeelka: waraabinta, manjooyin, xakamaynta cawska iyo jiilaalka
Daaqadaha currant ee caleenta ah waa beerta dheer ee beerta, waxay ku nool yihiin qiyaastii 15 sano, laakiin da'da tani waxaa lagu kordhin karaa dib u soo kabashada. Tani, in xilliga dayrta, baadiyaha da'doodu tahay 8-10 sano si buuxda u gooyay heerka dhulka, tegaayo oo kaliya caleemaha dhalinyarada, laakiin sida baadiyaha ah ma siin doono guga soo socda.
Qodobka aasaasiga ah ee daryeelka ee currants waa in laga hortago inay ka soo kabanayaan haramaha, taas oo saameyn xun ku leh xayawaanka ciidda ee xididdada. Waxaa lagula talinayaa in cayayaanka gacanta laga saaro, maadaama isticmaalka kiimikada ay saamayn xun ku yeelan doonto dhalidda iyo tayada miraha.
Sidoo kale, ha ilaawin inaad ciidda u daboosho ciidda ku dhow 2 jeer sannadkiiba (guga iyo dayrta) iyo bacriminta dalbo sannad kasta, sida Bisaylkiisa ee berry ah ayaa barbaro badan oo nafaqooyin ka soo ciidda. Feed for warshad aan loo baahnayn 2 sano ee ugu horreeya nolosha, haddii aad si sax ah u diyaargaroobay godkii beeritaanka. U hubso inaad fiiro gaar ah u yeelato horumarinta warshadda guga, haddii uu yahay mid jilicsan, markaa gaar ahaan wuxuu u baahan yahay quudinta. Waxaa la sameeyaa iyadoo la adeegsanayo digada lagu kariyay ama digada digaaga.
Sida waraabinta, waraabinta weli waa lagama maarmaan abaarta, qiyaastii 1-2 baaldiyo oo biyo ah halkii baadiyaha. Laakiin sida loo ogaado haddii ay currant u baahan tahay waraabinta? Aad u fudud - qodo maryaha u dhow baadiyaha, iyo haddii dhulka hoose uu qalalan yahay, ka dibna waraabinta waa lagama maarmaan. Currant casaanka waa mid u adkaysata qabow, laakiin weli waa u qalantaa in lagu daboolo laamo ama filim jiilaalka. In kasta oo, ilaalinta dabiiciga ah ee qabowga ah la samayn karaa marxaladda doorashada goobta degitaanka. Haddii aad go'aansato inaad kala tagto janno currant, kiiskan ma aha mid adag.
Waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida ay u midoobaan. Habka ugu kalsoonaan karo waa faafinta hababka. Si arrintan loo sameeyo, caleemaha dhalinyarada ayaa loola cararaa dhulka guga hore si ay u qaataan xidid. Dhowr jeer waqtiyada xagaaga, lakabyadaasi waxay u baahan yihiin in la nuugo si ay ugu raaxaystaan ​​si xididada loo qaato. Dhammaadka xilliga dayrta, dayrta, lakabka ayaa lagu qodaa oo lagu shubaa god diyaarsan. Sidaa darteed, waa mid aad u fudud oo aan qaali ahayn si loo yareeyo berry fiicnaanta.
Sida aad arki karto, ma jiraan wax dabiici ah ee helitaanka alaab caafimaad leh oo dhadhan fiican leh. Iyo intee in le'eg ayaad karin kartaan sheekooyinka culimada? Inkasta oo marti-geliyeyaashu ay leedahay qarsoodi u gaar ah, oo adiga iyo qoyskaaga labadaba ku faraxsan yihiin. Waxaan jeclaan lahaa caafimaadkaaga, niyadda wanaagsan iyo dareenka aad u qurux badan. Laga soo bilaabo currant cas, jacayl.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Boqolley beerto 2019